Suuq-galka Cilmi-baarista ah ee ku saabsan qiimaynta suuq-geynta
Xeeladaha suuq-geynta mar walba lagama maarmaan Imisa jeer ayaan maqalnay "SEO waa dhintay?" Kumanaan jeer. Si kastaba ha ahaatee, horumarinta SEO ma dhameystirnayn, waxay ku sii socotaa mid wax ka duwan.
Waqtigaan, SEO waa indissolubly la xiriira suuq suuqyada. Haddii aad sax tahay, tani waa inay noqotaa kiiska. Suuqgeynta Macluumaadka ayaa ku guuleystay in ay dhisto astaanta mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee suuq-geynta shabakadda. Haddii aad kicin karto waxyaabaha aad suuq-gareeysid ku habboon tahay, la-habboon yahay, iyo qalab qiimo leh, ka dibna waxaad ku-dallici doontaa abaal-marinnada qaabka kor loo qaado, qiimaha calaamadda, iyo ugu dambeyn, soo-celinta badan ee maalgashiga.
Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu sharxayaa sida loo sameeyo istaraatiijiyada suuq-galka ugu badan ee ganacsigaaga.
Sidee loo go'aamiyaa haddii aad ka faa'iidaysato faa'iidooyinka?
Dhamaadka, saameynta weyn iyo korodhka gaadiidka ee kor u qaadista heerarka wada-hadalka dadka oo kor u qaadaya, taas oo keenaysa faa'iido faa'iido leh..Tani waa ujeedada ugu dambeysa. Tani waa waxa soo noqda qiimo leh.
Laakiin markaan diirada saarno xadka ka baxsan xuduudaha, arrimaha muhiimka ah ee muhiimka ah laguma xisaabin karo. Shuruudo kale, sidee baad u qiimeyn kartaa suuq-geyntaada macaamiisha iyo ku xiran tahay inay ku soo noqoto maalgashiga?
Markaad qiyaasto inaad qaarada Yurub ku iibsato ROI, waa inaad isweydiisaa waxa ujeedooyinka ganacsigaagu iyo waxa aad filayso inaad ku guuleysato ololaha. Jawaabtaada tani waxay ku wargalin doontaa jaangooyooyinka aad adigu dareenka u leedahay. Qaar ka mid ah macluumaadkan ayaa sahlanaan kara in la qabto; Macluumaadka kale waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo caqli gal ah oo ay siiyaan faahfaahin buuxda oo ku saabsan waxqabadka content
Marka la eego suuq-geynta maaddooyinka, halkan waa qaar ka mid ah jaangooyooyinka ay tahay inaad ka fikirto:
Kharashka wax soo saarka
U diyaari qiimaha kharashka suuq-geynta ganacsigaaga.
Hayso dabagalka aad qarashka ku bixiso markaad faafineyso waxyaabahaaga.
Dakhliga soo kordhay
Korodhka faa'iidada ayaa saldhig u ah saldhigga oo aad qiimeynayso sii wadida sii-deyntaada macaamiishaada.
Dariiqa qiyaasta iyo wakhtiga ku baxsan bogga internetka
Go'aaminta labadan xuduudood waxay ku siinayaan aragti ku saabsan in dhagaystayaashu ay akhrinayaan mawduucaaga.
Sidee loo qiimeeyn lahaa Google Adwords?
Waa inaad awood u yeelatid caasimada aad maalgashatey suuq-galyada maadooyinka adoo tixgelinaya qiimaha xayeysiinta lagu sameeyo Google Adwords.
Intaas oo dhan, maskaxda ku hay in content waa in la buuxiyo ereyada muhiimka ah ee keenaya tirada ugu badan ee hogaamin.
Xiriirka u dhexeeya waqtiga iibka iyo xiriirka koowaad
Go'aaminta inta ay macaamiishu u qaadanayaan inay iibsadaan laga soo bilaabo isla markiiba waxay u arkaan in ay kuu sahlan tahay inaad fahamto wax ku oolnimada istaraatiijiyada suuq-geynta.
Go'aaminta qalabkan aad adigu u leedahay aragti ku saabsan waxyaabaha ugu fiican iibiya warbaahinta bulshada.
Waa inaad tixgelisaa tirada saamiyada, tweets, tiknoolajiyada, iyo downloads sababtoo ah waxay muujinayaan guulaha waxqabadyada suuq-geynta.
Waa in aad la socotaa mudada ay dhageysteen dadka dhagaystayaasha ah wax aqriya.
Go'aaminta waxyaabaha ay soo jiidanayaan soo-celiyaasha dhageystayaasha ayaa ku hadla xeeladaha suuq-geynta suuq-geynta.
Mudada dulucda ah
Waa in aad go'aamisaa naftaada sheygaaga ee alaabtaada iyadoo loo marayo liiska, aragtida, iyo faallooyinka.
Dabcan, tixgelin ka-qaybgalayaasha ka-qaybgalayaasha iyo saamiyada bulshada sida cabbiraadda warbaahinta caadiga ah. Jaangooyooyinka kor ku xusan waxay muhiim u yihiin go'aaminta taraafikada, walaaca, iyo saameynta waxyaabaha Source .